သိန္း 300 မွ သိန္း 400 ထိ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ရေကျော်လမ်းမကြီး အနီး၊ 14'x50'၊BR-1၊လျှာထိုးခင်း၊ရေ၊မီး၊ 370သိန်းရောင်းရန်ရှိသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10170566 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09421045692, 09788855333, 09421045692, 09785555699, 09266677877, 09420074367
အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း Makro အနီး အိပ်ခန်း (၂) ခန်းပါ တိုက်ခန်းအရောင်း။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10112421 အတွက် ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပုဇွန်​တောင် (၅) လွှာအ​ရောင်းခန်း။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9984167 အတွက် ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9972379 အတွက် ရွှေမဟာအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9803139 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9798825 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9777175 အတွက် ရွှေမဟာအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပုဇွန်​တောင်​ရေ​ကျော်လမ်းမအနီး၊ (၁၄​ပေxပေ၆၅) အသင့်​နေ ၆လွာ အ​ရောင်းခန်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9769672 အတွက် ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပုဇွန်​တောင်​စျေးနီး​ (၁၅​ပေx​ပေ၅၀) ၅လွာ (​ထောင့်ခန်း) အ​ရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9764251 အတွက် ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
​ရေ​ကျော်လမ်းမအနီး၊ (၁၄​ပေ×​ပေ၆၀) ၆လွာ(ထပ်ခိုးပါ) ရောင်းပါမည် (အ​လျော့အတင်းရှိ)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9750939 အတွက် ေဒၚေအးေအးေအာင္ (ခ)ေဒၚပိုက္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်